Madaxweyne Xasan oo dhalinyaro ku qaabilay Villa Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo dhalinyaro ku qaabilay Villa Somalia
2nd August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho, 02, Agoosto- Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in ay Dowladdiisu mudnaan weyn siineyso dhallinyarada oo uu ku tilmaamay in ay yihiin cudud aan looga maarmin nabadeynta, dib u dhiska iyo horumarinta dalka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in fursadaha dhallinyaradu ay yihiin kuwo aan xad lahayn, wuxuuna aad ugu dhiirri geliyay in ay is abaabusho oo ay ku midowdo hal hoggaan oo xaqiijiya xuquuqdooda, islamarkaana ku haga gudashada waajibaadka ka saaran dalka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay dowladdu dooneyso in ay dhallinyarada kala shaqeyso dhinacyada siyaasadda, sugidda amniga, horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaad iyo kobcinta dhaqaalaha.
Madaxweynaha oo maanta Xarunta Madaxtooyada kulan quraac ah kula qaatay dhallinyaro ay ka mid yihiin kuwa shaqeeya, qaar waxbarta, Madax ururro dhallinyaro iyo qaar ka soo laabtay dalka dibaddiisu,
Waxaa uu marka hore dhegeystay erayo isugu jiray codsi, su’aalo iyo talooyin ay soo jeediyeen dhallinyaradu.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka jawaabay su’aalaha isaga oo isla markaana sheegay in talooyinka iyo codsigaba la tix gelin doono. Wuxuuna ballan qaaday Madaxweynuhu in kulammada noocan ahi ay hadda ka dib sii socon doonaan.
Wasiirka Isboortiga Dr. Khalid Maxamed Cali, oo isna kulankaas khudbad ka jeediyay waxaa uu soo bandhigay waxqabadka Wasaaradda iyo in ay diyaarisay xarun ay dhallinyaradu ku shiri karaan ra’yigoodana ay ku kala qaadan karaan.
Bilcaantii reer Sudan ee ka baxday diinta Islaamka oo lagu soo dhaweeyey Mareykanka
Howlgal milateri oo hub & dad lagu qabtay oo xalay ka dhacay Muqdisho